QIIMEYNTA Shiinaha ee 1000 soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha Lumens | Hangchi
Darbiga Solar Light
3、20lm ilaa qorrax soo bax。
Balaastikada Kululaynta Kulka
TILMAAMAHA HABKA SHAQADA
1. Tusaha cagaaran oo keliya, M1: Iftiinka hal mar;
M2: Iftiiminta laba jeer;
M3: Iftiinka saddex jeer shid
: 20lm ilaa qorrax ka soo baxa
KU TALO DIIWAANKA
ALS (nidaamka la -qabsiga la -qabsiga): Marka la kulmo cimilada xun oo aan lahayn qorrax ku filan, nidaamku wuxuu samayn doonaa xisaabinta waqtiga habboon ee awoodda batteriga soo hadhay wuxuuna siin doonaa adeegsi wax -soo -saarka ugu badan waqtiga iftiinka dheer.
2. Badeecada waxaa gacanta ku haya beddel caqli badan, sidoo kale waa beddel otomaatig ah oo kontarool leh. Tusaale ahaan, nalka gidaarka qoraxda ayaa si otomaatig ah u dammi doona maalintii wuxuuna shidan yahay habeenkii.
3. Sababtoo ah laambadda darbiga qoraxda waxaa kaxeeya tamarta iftiinka, uma baahna in lagu xidho il kale oo koronto, sidaa darteed looma baahna in la sameeyo fiilooyin daallan. Marka labaad, laambadda darbiga qoraxda waxay u shaqaysaa si aad u deggan oo lagu kalsoonaan karo.
4. Nolosha adeegga nalka darbiga qoraxda aad bay u dheer tahay. Sababtoo ah waxay u isticmaashaa jajabyada semiconductor -ka si ay iftiin u soo saarto, ma jirto wax fiilo ah. Isticmaalka caadiga ah oo aan lahayn waxyeello dibadeed, cimrigiisu wuxuu noqon karaa ilaa dhowr saacadood, oo aad uga badan noocyada kale ee nalalka.
5. Maaddooyinka ku jira laambadaha caadiga ah waxay deegaanka u keeni doonaan wasakh weyn. Laakiin laambadda darbiga qoraxda ma laha walaxdan, xitaa haddii la xoqo, ma wasakhaynayso deegaanka.
6. Soo-gaadhista ultraviolet-ka iyo infrared-ka muddo dheer waxay dhaawac u geysan kartaa indhaha dadka, laakiin laambadda darbiga cadceedda lafteeda kuma jiraan kuwan, soo-gaadhista muddada dheerna waxyeello uma geysan doonto indhaha dadka.
Hore: 2000 lumen iftiinka darbiga qoraxda ee waddada
Xiga: S6 LED SOLAR STREET LIGHT 20W-60W
OPZV & OPZS baytar dib -u -warshadayn qoto dheer leh